टिचिङ अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्लाज्माथेरापी प्रयोग, संक्रमितको स्वास्थ्यमा सुधार – Health Post Nepal
टिचिङ अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्लाज्माथेरापी प्रयोग, संक्रमितको स्वास्थ्यमा सुधार
२०७७ साउन १८ गते १६:१२
नेपालमै पहिलोपटक कोरोना संक्रमित एक बिरामीको उपचारमा प्लाज्माथेरापी विधिको प्रयोग गरिएको छ । संक्रमणपछि निमोनिया देखिएको ६५ वर्षे पुरुषको उपचारमा यो विधि प्रयोग गरिएको हो । प्लाज्मा दिएको ४८ घण्टापछि निकै सुधार आएको अस्पताल कोभिड युनिट संयोजक डा. सन्तकुमार दासले जानकारी दिए ।
डा. दासकाअनुसार संक्रमण जितेर व्यक्तिको शरीरबाट रगत झिकेर त्यसबाट आरबिसी र प्लेटलेट निकालेर प्लाज्मा बनाइन्छ । अस्पतालमा आइसियु संयोजक डा. सुवास आचार्यकाअनुसार ती बिरामीको उपचारमा भाइरल र ब्याक्टेरियाल सबै विधि प्रयोग गर्दा पनि अपेक्षित सुधार नआएपछि प्लाज्माथेरापी गरिएको थियो । प्लाज्मा निजी क्षेत्रको ग्रान्डी अस्पतालमा बनाइएको थियो ।
कोरोना जितेका व्यक्तिमा बन्ने एन्टिवडीले संक्रमितको शरीरमा एन्टिवडी विकास गरेर सुधार हुने भन्दै संसारभर धेरै देशमा जटिल अवस्थाका बिरामीको विकल्पको रुपमा यसको प्रयोग गरिन्छ ।
आचार्यले अहिले चर्चामा रहेका सबै औषधिको प्रयोग त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गरिसकिएको जानकारी दिए ।
‘५ दिनसम्म सुधार नभएसँगै कोडिभ मेनेजमेन्ट टिम बसेर स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को परामर्श गरेर डोनर खोजेर यो विधिमा जाने निर्णय गर्यौं’ डा. दासले भने ।
डा. आचार्यका ती विरामीको उपचारमा अस्पतालले भारतबाट झिकाएर रेन्डेसिभीर एन्टिभाइरल औषधि समेत चलाएको थियो ।
‘उहाँ अस्पताल आउँदा ९० प्रतिशत अक्सिजन सपोट चाहिने अवस्था थियो, अहिले २४ देखि २८ प्रतिशत अक्सिजन सपोटमा हुनुहुन्छ’ डा. दासले भने, ‘एक्सरेमा हेर्दा निमोनियासमेत ७० सुधार आइसकेको छ’
डा. दासका अनुसार ती विरामीलाई एक÷दुई दिनमै वार्डमा सार्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्लाज्माथेरापीपछि संक्रमितको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको अस्पतालले जनाएको छ । बिरामी र प्लाज्मा दिने व्यक्तिको नामसमेत गोप्य राखेको अस्पतालले ती बिरामीको उपचारमा संसारमा कोरोना उपचारमा अपनाइएका सबै विधि प्रयोग गरेका डा. आचार्यले जानकारी दिए ।